World Smallest Country, Vatican City | NU MYAT AROUND THE WORLD
ရောမအင်ပါယာကြီးထွန်းကားရာ အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့ကြီးက ဘုန်းမီးနေလတောက်ခဲ့တုန်းက ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံတွေနဲ့ ထူးခြားနေပါတယ်။ ရောမမြို့ထဲမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပါရှိနေတယ်ဆို ပိုပြီးထူးဆန်းမနေဘူးလား။ ဟုတ်ပါတယ်။ ရောမမြို့ထဲမှာ ကမ္ဘာ့အသေးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ ဗာတီကန်စီးတီး (Vatican City)နိုင်ငံ တည်ရှိလို့နေပါတယ်။ ဗာတီကန်နိုင်ငံဟာ ဘယ်လောက်များသေးလဲဆိုရင် အကျယ်အ၀န်းအားဖြင့် ၁၁၀ ဧကသာကျယ်ဝန်းပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့နဲ့ယှဉ်ရင်တောင် အဆပေါင်း ၁၃၀၀ကျော်သေးငယ်ပါတယ်။ ပန်းခြံကြီးတစ်ခု၊ အိမ်ရာစီမံကိန်းတစ်ခုစာလောက်ပဲကျယ်တာပါ။ ရောမမြို့နဲ့ ၂မိုင်ကျော် နယ်နိမိတ် ထိစပ်နေတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပြီး နယ်နိမိတ်အများစုကို တံတိုင်းတွေကာထားပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံးနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံက ရုရှား၊ ကနေဒါနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတို့ဖြစ်ကြပြီး အသေးဆုံးနိုင်ငံသုံးနိုင်ငံကတော့ ဗာတီကန်စီးတီး၊ မိုနာကိုနဲ့ သြစတြေးလျတိုက်နားရှိ Nauru ကျွန်းနိုင်ငံတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအသေးဆုံးနိုင်ငံ မိုနာကိုအကြောင်းကိုတော့ ပြည်မြန်မာဂျာနယ်မှာ ရေးသားဖော်ပြပြီးပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၂၉ခုနှစ်မှစတင်ကာ မြို့နိုင်ငံအဖြစ်စတင် သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး မြို့နဲ့နိုင်ငံတစ်ခုတည်းဖြစ်တဲ့ City-State ဖြစ်တာကြောင့် စင်္ကာပူတို့ မိုနာကိုတို့လိုပဲ မြို့ဆိုပြီး သီးသန့်ရှိမနေပါဘူး။ ဗာတီကန်နိုင်ငံကို ၂၀၁၀ခုနှစ်က စာရေးသူရဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်ထဲမှာ ရောမမြို့သို့သွားရင်း သွားရောက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံက အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်သလို လူဦးရေလည်း အနည်းဆုံးနိုင်ငံပါ။ လူဦးရေပေါင်း ၁၀၀၀တောင်မပြည့်ပါဘူး။ လူမျိုးအများစုက အီတလီလူမျိုးတွေဖြစ်လို့ အိတလီဘာသာစကားကိုသာ ပြောကြပါတယ်။ ဗာတီကန်နိုင်ငံတွင်းမှာ ဆေးရုံမရှိလို့ နိုင်ငံတွင်းမွေးဖွားတဲ့သူမရှိပါ။ နိုင်ငံထဲ နေထိုင်အလုပ်လုပ်ကိုင်သူတွေကိုသာ နိုင်ငံသားပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗာတီကန်ဟာ အီတလီနိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေပေမဲ့ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံသားတွေကို အစောင့်တွေအဖြစ် ဌားရမ်းကာ တပ်ဖွဲ့ထားပါတယ်။ ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ထားပြီး အရည်အသွေးမြင့်မားတဲ့ အသက်၁၉နှစ်ကနေ ၃၀အတွင်း အရပ်၅ပေ၈လက်မခွဲထက်အမြင့်ရှိတဲ့ ဆွစ်ဇာလန်လူမျိုး လူပျိုလူလွတ်တွေကိုသာ ရွေးချယ်ခန့်ထားတာကြောင့် ဗာတီကန်နိုင်ငံရဲ့ တပ်ကသေးငယ်ပေမဲ့ အထင်သေးလို့မရပါဘူး။
ဗာတီကန်နိုင်ငံဟာ သေးငယ်ပေမဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာတိုက်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်တံဆိပ်ခေါင်းရှိပြီး ဗာတီကန်စာပို့စနစ်က အီတလီထက်တောင်ပိုကောင်းပိုမြန်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် ရေဒီယိုအသံလွင့်ဌာန ရှိကာ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားသို့ ဘာသာစကားပေါင်း၂၀ခုဖြင့် ထုတ်လွှင့်လျှက်ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတော်အလံ၊ နိုင်ငံတော်သီချင်း၊ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်၊ ငွေသားတို့လည်း ကိုယ်ပိုင်ရှိပါတယ်။ ပုပ်ရဟန်းမင်းပုံပါရှိတဲ့ ၁ယူရိုတန်အကြွေစေ့ကို စုဆောင်းသူများတယ်လို့သိရပါတယ်။
အသေးဆုံးတွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဗာတီကန်မှာ အကြီးဆုံးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးနက္ခတာရာကြည့်မှန်ပြောင်းကြီးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ ဒါပေမဲ့ ဗာတီကန်စီးတီးနိုင်ငံတွင်းမှာ မဟုတ်ဘဲ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ အရီဇိုးနားပြည်နယ်ထဲ ထားရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း စိန့်ပီတာဘုရားကျောင်းကြီးလည်း နိုင်ငံတွင်းရှိလို့နေပါတယ်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်အတွက် အမွန်မြတ်ထားရာ ဘုရားကျောင်းကြီးဖြစ်ပြီး လက်ရာမြောက်လှတဲ့ အနုစိတ်ဗိသုကာလက်ရာများကြောင့်လည်း ကမ္ဘာမှာကျော်ကြားလှပါတယ်။ နဂိုရှိပြီးသား ဘုရားကျောင်းအုတ်မြစ်ကိုအခြေခံပြီး အသစ်တည်ဆောက်တာ နှစ်ပေါင်း ၁၂၀တိုင်ကြာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပန်းရန်၊ ပန်းပု၊ ပန်းချီ၊ မှန်စီစတဲ့ အသေးစိတ်အလှဆင်တာ နောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ကြာသွားပါတယ်တဲ့။ အခန်းပေါင်း ထောင်ကျော်ရှိပြီး အဆောက်အအုံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်နေတဲ့ ဗာတီကန်နန်းတော်ကြီးတွေလည်းရှိပါတယ်။နန်းတော်တွေရှိပေမဲ့ ဘုရင်တော့ မရှိပါဘူး။ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးလက်အောက် သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိမှာ ၂၀၁၃ခုနှစ်ကတည်းက ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံခဲ့ရတဲ့ ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဖရန်စစ်အုပ်ချုပ်နေပါတယ်။
သေးငယ်လှတဲ့နိုင်ငံလေးမှာ ၀င်ငွေကတော့ ပြတိုက်ဝင်ကြေးနဲ့ တံဆိပ်ခေါင်းရောင်းရာကနေ အဓိကရပါတယ်။ အီတလီလူမျိုးတွေအနေနဲ့ နှစ်စဉ်အခွန်ခရဲ့ ၈ရာခိုင်နှုန်းကို အစိုးရကိုမပေးဘဲ ဗာတီကန်ဆီ လှူချင်ပါက လှူခွင့်ပေးထားပါတယ်။ တစ်နှစ်ကို ဧည့်သည် ၅သန်းလောက်လာလို့ နိုင်ငံတွင်း အမြဲလူပြည့်နေတတ်တယ်။ ဘုရားကျောင်းထဲ၊ ပြတိုက်ထဲ ၀င်ကြည့်ချင်ပါက အကြာကြီးတန်းစီရပါတယ်။ ဗာတီကန်ပြတိုက်တွေ အနှံ့သာသွားကြည့်မယ်ဆိုရင် ၉မိုင်အရှည်ရှိလို့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ကို တစ်မိနစ်သာခံစားမယ်ဆိုရင်တောင် ပန်းချီကားအကုန်လုံးကို ခံစားကြည့်ရှုဖို့ လေးနှစ်လောက်အချိန်ယူရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ဗာတီကန်စာကြည့်တိုက်နဲ့ Sistine Chapel ရှိ စတုရန်းပေပေါင်း ၆၀၀၀ကျော်ရှိ မိုင်ကယ်အန်ဂျလိုလက်ရာ မျက်နှာကျက်ပန်းချီကားကြီးကလည်း အနုစိတ်ကာ လက်ရာမြောက်လွန်းသဖြင့်ကျော်ကြားလှပါတယ်။ အနုပညာလက်ရာမြောက်တဲ့ အဆောက်အအုံတွေ၊ သမိုင်းအရ၊ ဘာသာရေးအရ အရေးပါတဲ့ နေရာနဲ့ အဆောက်အအုံတွေများစွာရှိလို့ UNESCO အသိအမှတ်ပြု သမိုင်းဝင်နေရာ အဖြစ် တစ်နိုင်ငံလုံး အသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့ တစ်ခုတည်းသောနိုင်ငံလည်းဖြစ်လို့နေပါတယ်။
This entry was posted in Europe, Heritage, Travel, Uncategorized and tagged Europe, Experience, Nu Myat around the World, Travel. Bookmark the permalink.
← Venice, Floating City
Vienna, the City of Art →